လှတယ် မ :)))
အဆုံးသတ်လေး မျှော်နေတယ်နော် :)
ခုမှအစ ... ကိုရီးယားဒရမ်မာ
ဒါဆို ခု အစသွားဖတ်လိုက်အုန်းမယ်။ :P
ဖတ်ရင်း ဆန့်တငံ့ငံ့ ဖြစ်သွားတယ်..
အပိုင်း (၂) ကိုမျှော်နေမယ်. Sis ရေ...
အမမိုးငွေ့ .. ဖတ်နေရင်း လွမ်းသလိုလို ဆွေးသလိုလို တောင်ဖြစ်သွားတယ် .. ဆက်ရန်လေး မျှော်နေမယ်နော် :)
အခန်းဆက်တွေနဲ့ လူကို ဖမ်းစားလိုက်ပြီပေါ့..။ ချစ်စရာဇာတ်လမ်းအဖွင့်လေး..။ အကြာကြီးမထားပဲ ဆက်ရေးပေးနော်..။
မမိုး အခန်းဆက် လုပ်ပြန်ပြီ . . အင်း ဖတ်ချင်တော့လည်း စောင့်ရဦးမပေါ့လေ . . . . .း)))
ညီစေမင်း . . .
အယ် ဟုတ်ပါဘူး . . ဗညားရှိန် . .း)))))